खाना अपच हुने समस्या छ ? समाधानका लागि यी हुन् घरेलु उपाय – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / खाना अपच हुने समस्या छ ? समाधानका लागि यी हुन् घरेलु उपाय
खाना अपच हुने समस्या छ ? समाधानका लागि यी हुन् घरेलु उपाय
admin February 16, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 95 Views
खाना अपच हुनु पनि स्वास्थ्य समस्या हो । यसको बेलैमा उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइँ गरेमा गम्भीर समस्या आइलाग्न सक्छ । यस कारण कुनै पनि समस्यामा देखिएमा बेलैमा समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । खान अपच भएमा अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस् ।
Previous यस वर्षको होलीमा धेरै पवित्र योग, अशुभ शक्तिहरूबाट छुटकारा पाउन यी कार्य गर्नुहोस
Next २३ देखि २७ फेब्रुअरीसम्म यी ४ ठुला ग्रहहरुका चाल परिवर्तन हुँदै : यी राशि ७ रहनुपर्नेछ सावधान !